Ngathi | Yuyao Sanxing Mechanical & Electrical Technology Co., Ltd.Ukuthengiswa kweShishini:
Yuyao Sanxing Mechanical & Electrical Technology Co., Ltd.Ukuthengiswa kweShishini:lishishini elidityanelweyo lesitokhwe esidibanisa imveliso, uphando kunye nophuhliso lweemveliso zombane. Inkampani ikakhulu igxile kuphando, uphuhliso kunye nokuveliswa kwee-actuator ezinemigca, iibhokisi zolawulo, iinkqubo zokwenza umabonwakude kunye neenkqubo zokufika, iinkqubo zokuphakamisa ifanitshala kunye nezinye iimveliso, kwaye ngokuthe ngcembe zenze imveliso ekhethekileyo.
Iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kwiisofa zombane, izitulo zokuthambisa, izitulo zamazinyo, iibhedi zonyango zombane, iibhedi zokutsala, izixhobo zokubala zethelevishini, ifanitshala kunye nezinye iintshukumo zifuna ukushukuma komgama kweearhente zomnyhadala. Kulula kakhulu ukuyifaka. Isigqithile isiQinisekiso se-CE se-Europe kwaye sihambelana neemfuno zomyalelo we-EU ROHS. Zisetyenziswa ngokubanzi kulonwabo, ifenitshala, imichiza, ezonyango nakwezinye iinkalo.
Sineqela elinesibindi, elinobuchule kunye nelimanyeneyo. Ngeteknoloji ephuhlisiweyo evela phesheya, izinto ezaziwayo zohlobo lwebrand kunye nomzamo wethu oqhubekayo, iimveliso zethu zifezekisa umgangatho ophezulu. Wamkelekile kwinkampani yethu ukuba ujonge kwaye usinike iingcebiso ezakhayo.
Umatshini wokuhambisa umbane omncinci, Ulawulo lwe-Wireless Remote lweSibhedlele, Ulawulo lweBhedi yasesibhedlele, Ulawulo lweBhedi yoMbane, Isantya esiphezulu seLine Actuator, Ulawulo lweBhedi yonyango kude,